၂၀၀၇ ခုနှစ်အတွင်းကျင်းပတဲ့ အစည်းအဝေးတခုမှာ လီကွမ်ယူနဲ့ အမေရိကန်သံအမတ် Ms Patricia Herbold တို့ တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း ပြောဆိုခဲ့ကြတာလို့ ဆိုပါတယ်။
မူလ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ ဘုံတန်ဖိုးတွေ ရှိကြတဲ့အကြောင်း၊ ဒီတန်ဖိုးတွေဟာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကြောင့် ညစ်နွမ်းရကြောင်း၊ အဲဒီနိုင်ငံတွေ မှာ စီးပွားရေး လူမှုရေး ပြဿနာတွေရှိတဲ့ အတွက် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဟောင်းတွေလို ဆောင်ရွက် ပြုမူနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ သံသယပွားမိရတဲ့အကြောင်း လီကွမ်ယူက ပြောဆိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီကြေးနန်းကို သြစတြေးလျ၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံနဲ့ အမေရိကန်သံရုံးတွေနဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို ပေးပို့ခဲ့တဲ့အတွက် ဒါဟာ အတင်းအဖျင်းသက်သက်လည်း မဟုတ်၊ အရက်ဝိုင်းမှာ ပြောတဲ့ စကားလည်း မဟုတ်ဘူးလို့လည်း ဖော်ပြပါတယ်။
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လီကွမ်ယူရဲ့ ဝေဖန်ပြောဆိုချက်တွေကို WikiLeaks အင်တာနက်သတင်းက ဖွင့်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက် မလေးရှားအစိုးရက စင်ကာပူသံအမတ်ကြီးကို ဆင့်ခေါ်ပြီး ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီပေါက်ကြားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း လီကွမ်ယူှ ဆီကတော့ တစုံတရာ ပြောဆိုချက် ထွက်ပေါ်မလာသေးပါဘူး။
Singapore Sr. Leader saying the right selection of ASEAN Chaiman post is not suitable from Burma. Burma is using the DRUG MONEY and not sincere Government. All of their seniors are saying they trying for development, but all are same and the final result is the POOREST country since 1988 and they destroy Burma until 2013 or now. So, the military is cheating to Public and World.
Apr 15, 2013 09:30 AM
THIS NEWS IS VERY RESONABLE REMARK FOR MYANMAR.AFTER BECOMING ASIAN MEMBER THE MYANMAR GENERALS ARE STAYING AWAY TO COMPLY THE AGREEMENT BETWEEN ASIAN NATIONS.THEY NEVER TRY TO GET SOULTIONS AMONG LOCAL POLITICAL PARTIES AND NATIONAL RACES.EVERYTHING THEY THINK AND THEIR DOING IS RIGHT.OTHER IS NOTHING.THAT IS THEIR POLICY AND THEIR ROAD MAP.NOBODY CAN NOT TAKE HIGHER POSITION EXCEPT MILITARY OFFICERS TO COVER AND SAFE THEIR WEALTH AND THEIR GENERATION.SO NO MYANMAR PEOPLE LOST THEIR HOPES AND BELIEF IN THEM.